निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको औसतमा नाफा घट्यो, वास्तविक प्रति शेयर आम्दानी कति ? – Insurance Khabar
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको औसतमा नाफा घट्यो, वास्तविक प्रति शेयर आम्दानी कति ?
प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:१७
नेपाल स्टक एक्चेञ्जमा १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको शेयर किनबेच हुन्छन । १५ निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को दोश्रो त्रैमास ( ६ महिनाको ) वित्तिय विवरण प्रकाशन गरेपनि खुद नाफाको हिसाबमा सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
१५ निर्जीवन बीमा कम्पनीको खुद नाफा औसतमा गत आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमास भन्दा यो आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमास सम्मा करिब ३ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो त्रैमासमा युनाईटेड इन्स्योरेन्सको नाफा सर्वा्धिक ५७ प्रतिशत र रास्ट्रीय बीमा कम्पनीको खुद नाफा ५५ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो वर्ष सबै भन्दा धेरै नाफा वृद्धि गर्नेमा नेपाल इन्स्योरेन्स पर्दछ । नेपाल इन्स्योरेन्सले सर्वा्धिक आफ्नो खुद अनाफा ७१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।
१५ निर्जीवन बीमा कम्पनीको औसत प्रति शेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ छ । सबै भन्दा धेरै प्रति शेयर आम्दानी रास्ट्रीय बीमा कम्पनीको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी १२६ रुपैयाँ ३४ पैसा छ भने सबै भन्दा थोरै प्रति शेयर आम्दानी प्रभु इन्स्योरेन्सको ८ रुपैयाँ रहेको छ ।
नोट: एभरेस्ट इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद प्रयोजनाक लागि बुक क्लोज भैसकेको र मूल्य समायोजन भए पश्चात नयाँ चुक्ता पूँजीका आधारमा प्रति शेयर आम्दानी गणना गरिएको छ ।
वार्षिकरण नभएको प्रति शेयर आम्दानीलाई वार्षिकरण गरिएको छ ।